7 Halis iska ilaali oo ka fiirso xiliga aad careysan tahay Hadii kale Qatartaan ayaad lakulmi doontaa | shumis.net
Home » galmada » 7 Halis iska ilaali oo ka fiirso xiliga aad careysan tahay Hadii kale Qatartaan ayaad lakulmi doontaa
7 Halis iska ilaali oo ka fiirso xiliga aad careysan tahay Hadii kale Qatartaan ayaad lakulmi doontaa
Todobadan talo ee hoos ku taallo waa tusaalooyin kaaga digaya in aad iska ilaaliso caradda, ama xiligaa ad careysan tahay aadan sameyn wax yaabo badan oo noloshaada bur burin kara.
2. Dad la macaamilka: Waxaa hubaal ah in cadhadu ay xumayso dabeecadda iyo hab-dhaqanka uu qofku dadka kale kula macaamilayo. Sidaa awgeed, qofku mar kasta oo uu cadhoodo waa in uu xasuustaa in uu naftiisa xakameeyo, waa in uu xasuusto in hab-macaamilkiisa iyo ereyada uu dadka ku xeeran ku oranayaa ay yihiin waxa sii xoojin kara ama jari kara xidhiidhka uu bulshada la leeyahay, ama ugu yaraan abuuri kara jawi ay dadku qalad ka fahmaan. Marka aad cadhooto ku dadaal in aad dadka ka durugto, jawi deggen aad raadiso, isla markaana ku dadaasho hababka aad hore u taqaannay ee xaaladaha murugada iyo cidhiidhiga nafsiga ah aad isku dhaafin jirtay.
3. Baabuur kaxaynta: Waxaa waajib ah in qofku marka uu cadhaysan yahay uu ka dheeraado baabuur kaxaynta. Daraasado kala duwan oo hore loo sameeyey ayaa iftiimiyey in qofka cadhaysani inta badan si cadaawadi ka muuqato baabuurka u kaxeeyo, taasoo sababi karta shil iyo in uu noloshiisa ku qamaaro.
4. Dad la hadalka: Sida dabiiciga ah qofku waxa uu jecel yahay in uu ka sheekeeyo mushkiladaha uu la kulmo iyo loollanka naftiisa isaga kula jirto, laakiin taasi ma fiicna oo haddii ay badato waxa ay keeni kartaa in dadka aad la wadaagto ama uga warranto wax yaabo badan oo ay muhiim ahayd ama fiicnayd in ay sir kuu ahaadaan, si aanu warkaasi u faafin kadibna ceeb adiga kuugu noqon.
5. Caadooyin xun oo aad hore u joojisay: Cadhadu waxa ay caan ku tahay in ay jebiso go’aanka iyo hal-adayga qofka, isla markaana qofka si sibiq ah ugu celiso caadooyin uu hore isaga daayey, sida sigaarka, sakhradda, qaadka iwm, sidaa awgeed waxaa muhiim ah in qofku marka uu cadhoodo uu markaaba nafta xasuusiyo go’aamada ay hore u qaadatay ee aanay ahayn in cadhadani beddesho, waxa ay khubarada cilmi nafsigu ku taliyaan in ay fiican tahay marka uu qofku cadhoodo in uu jimicsi sameeyo.
6. Saaxiibbo samaysi: Dadka qaar ayaa cadhada badani ku kalliftaa in ay bulshada oo dhan saaxiib u arkaan oo kii ay arkaanba uga warramaan cadhadooda iyo sababaheeda, laakiin khubarada cilmi nafsigu waxa ay ku taliyaan in qofku marka uu cadhaysan yahay uu dadka ku cusub ka fogaado, si aanay shakhsiyaddiisa faham qaldan uga qaadan.
Dhinaca kalana daraasado la sameeyey ayaa daahfuray in dadka cadhada iyo nacaybku ku yar yihiin ay yihiin kuwo ugu badan guusha, iyo in ay bulshada shacbiyad ku dhex yeeshaan, waayo dadku waxa ay jecel yihiin dadka dhoolla caddaynta badan ee anshax-wanaag iyo akhlaaq fiicnidu ka muuqato.
Title: 7 Halis iska ilaali oo ka fiirso xiliga aad careysan tahay Hadii kale Qatartaan ayaad lakulmi doontaa
Posted by galmada Net, Published at February 22, 2016 and have 0 comments